Wararkii ugu dambeeyay Suuqa kala iibsiga oo maalintiisii 17aad galay -
HomeciyaarahaWararkii ugu dambeeyay Suuqa kala iibsiga oo maalintiisii 17aad galay
Wararkii ugu dambeeyay Suuqa kala iibsiga oo maalintiisii 17aad galay
January 17, 2018 F.G ciyaaraha 0
Kooxda Chelsea ayaa usoo bandhigtay Kooxda West Ham dalab joogta ah ay kaga dooneyso saxiixa 29-jirka reer England ee Andy Carroll. (Telegraph)
Kooxda West Ham ayaa dooneysa inay dhageysato dalabyada 20-ka milyan ee lagu doonayo Carroll. (Sky Sports)
Xiddiga qadka dhexe ee reer Armenia Henrikh Mkhitaryan, 28-jir ayaa doonaya mushaar kordhin si uu uga tago Man United uguna biiro Arsenal. (Mirror)
Kooxda Everton ayaa lagu wadaa in maanta oo arboco ah ay dhammeystirto saxiixa xiddiga reer England ee Arsenal Theo Walcott, 28-jir. (Liverpool Echo)
Weeraryahanka reer Gabon Pierre-Emerick Aubameyang, 28-jir ayaa waydiisanaya Borussia Dortmund inay u ogolaadaan inuu ku biiro Arsenal.(Mirror)
Xiddiga qadka dhexe ee England iyo Arsenal Jack Wilshere, 26-jir kaa oo beeca xorta ah ku tagi kara Xagaaga ayay qasab ku tahay inuu ka gudbo caafimaadka buuxa isla markaana uu sameeyo mushaar dhimis 20% si uu u helo qandaraas cusub. (Sun)
Xiddiga qadka dhexe reer Serbia ee kooxda Liverpool Marko Grujic, 21-jir ayaa waxaa heshiis amaah ah ku bartilmaameedsanaya kooxaha Middlesbrough iyo Cardiff City. (ESPN)
Weeraryahanka Southampton Manolo Gabbiadini, 26-jir ayaa dib ugu laaban kara mid ka mid ah kooxihiisii hore Bologna. (Sky Itali)
Madaxwaynaha naadiga Bordeaux Stephane Martin ayaa sheegay in kooxdiisu waqti adag qaadan doonto si ay isugu daydo inay la soo saxiixato weeraryahanka Malcom, iyadoo ay jirto qiyaas fikradeeda 20-jirka reer Brazil la xiriirinaya inuu u dhaqaaqo Premier League. (L’Equipe)
Kooxda Tottenham ayaa ka mid ah kooxaha xiiseynaya 21-jirka qadka dhexe ee reer England ee naadiga Norwich City James Maddison. (Evening Standard)
Kooxda Fulham ayaa ku jirta wada hadalada heshiis ay ku soo xiro galineyso 31-jirka garabka ka ciyaara ee reer Argentina Sebastian Leto, kaa oo Beeca xorta ugu soo biiri kara. (Daily Mail)
Daafaca reer Serbia Neven Subotic, 29-jir iyo midka reer Spain Marc Bartra, 27-jir ayaa ka soo tagi kara Borussia Dortmund bishan Janaayo. (Bild)
Kooxda Barcelona ayaa soo diiday dalab 25 milyan oo euro (22.2 milyan oo bound) oo kaga yimid Inter Milan oo ay kaga dooneysay 24-jirka qadka dhexe reer Brazil Rafinha oo waxay ku doonayaan 40-milyan oo euro (35.5 milyan oo bound). (Mundo Deportivo)
Kooxda Cardiff ayaa wada hadalo la yeelatay Bournemouth oo ku aadan saxiixa 30-jirka weerarka reer England Lewis Grabban. Bournemouth Echo.